Ummeli webhizinisi laseMichigan Cannabis - uScott Roberts Law Talks MMFLA kanye neLARA
Ummeli webhizinisi laseMichigan Cannabis uScott Roberts
AIbhizinisi le-cannabis laseMichigan lisondela lapho uMbuso uqala ukuthatha izicelo zamabhizinisi wokuzijabulisa ngoNovemba 1, 2019. IMicrosoft isemthethweni ukusetshenziswa kwabantu abadala ngonyaka we-2018 ngamavoti angama-56% kepha kubikezelwe ukuthi ibhizinisi lokuqala lokuzijabulisa ngeke livule kuze kufike unyaka ka-2020 Kuleli sonto u-Miggy noTom bajoyine ummeli webhizinisi le-cannabis Scott Roberts ovela UScott Roberts Law ukuxoxa nge-cannabis landscape yaseMichigan.
Lapha eMichigan, imithetho nemithetho ye-cannabis ihlala ivela futhi ukwenziwa kwemithetho kuzoshintsha ngaphandle kokuqashelwa. The I-MRA (I-Ejensi Yokulawula iMichigan) elawula insangu, kwesinye isikhathi ingashintsha nje ukufunda kwayo ezintweni futhi uma ungazibandakanyi kuyo ngeke wazi. Kunemininingwane eminingi kuwebhu kodwa uma kungaphezulu konyaka noma emibili ubudala kunethuba akusekho kuze kube manje. - Scott Roberts
Uyini uScott Roberts Law?
Inkampani esebenza ngokugcwele ye-cannabis yebhizinisi yomthetho
Isebenza ngeziqalo namabhizinisi asunguliwe
Isiza lonke ibhizinisi le-cannabis kusuka ekuthobeleni, kuya kwelayisense, ekuthengiselweni kwebhizinisi
Siza ibhizinisi le-cannabis lezokwelapha lihambisane noMthetho Wezokwelapha waseMichigan Medical Marihuana (MMMA), i-Medical Marihuana Equipment Licensing Act (MMFLA), uMnyango Wezokulayisensa kanye Nezinkambiso Zokulawula (i-LARA), imikhawulo yokuwa kwemigwaqo kamasipala, neminye imithetho esebenzayo
Indlunkulu eDetroit, eMexico
Yini i-Cannabis Microbusiness?
Ibhizinisi elincane elivunyelwe ukukhula futhi licubungule izitshalo ezingama-cannabis ezingama-150 futhi likhiqize futhi lithengise imikhiqizo ngokuqondile kubathengi elivela ezithelweni zalo
Microbusinesses zidalelwe ukuvikela izifunda ezifana neCalifornia ne-Michigan ezinkampanini "ezinkulu ze-cannabis" ezifuna ukwenza ngamandla imakethe ye-cannabis
Izicelo zama-microbusinesses akudingekile ukuthi zibe nelayisense lensangu yezokwelapha njengoba kudinga amalayisense okuzijabulisa
Ama-Microbusinesses anamathuba amaningi wethuba lebhizinisi kusuka ezinkulweni ezise-cannabis themcades to restres and the movie movie
Ini Ama-Michiganders Isidingo Sokwazi mayelana Namalungelo abo E-Cannabis
Imithetho ye-canabis iyinkimbinkimbi edumile kepha kubalulekile ukwazi amalungelo akho njengomthengi kanye nabahlali. Noma ngabe ungusomabhizinisi noma umthengi nje ojwayelekile, ungangabazi ukufinyelela kummeli ukuze ucacelwe futhi awuqondise. Izakhamizi zaseMichigan ezingaphezulu kweminyaka engama-21 ubudala:
Thatha izimbali ezingama-10 ozimbali ekhaya labo kanye no-2.5 oz ngaphandle kwendlu yabo
Amandla afinyelela ku-15 amagremu we-cannabis ligxile
Khula kuze kube ngu-12 izitshalo emakhaya abo
I-cannabis yezokuhambisa kwiphakeji evaliwe futhi enelebuli eligcinwe esiqwini semoto (noma enye indawo emotweni yakho engatholakali kalula)
UScott Roberts Law
Ukuqala namabhizinisi asunguliwe kuvame ukubheka ummeli webhizinisi lase-cannabis laseMartin ukuze ahambisane nomthetho osemthethweni wezamabhizinisi we-marijuana. Akunandaba noma udinga ilayisense leMMFLA, thola indawo ethengiswayo, noma ufuna ukusungula ibhizinisi lokuthenga noma lokuthengisa nge-cannabis, ummeli webhizinisi lase-cannabis laseMichigan angasiza.
Imiphi Imithetho Yebhizinisi LaseCannabis eMichigan?
NgoNovemba 1, 2019, izwe laseMichigan lathatha isinyathelo sokugcina emithethweni evumela abafaka izicelo ukuqala ibhizinisi lokuzijabulisa insangu. Izicelo zokuqala sezivele zithunyelwe online, futhi sibona abafakizicelo abaningi abafuna ukwazisa kangcono ngemithetho nemithetho ephathelene nebhizinisi lensangu.
Umsebenzi oyinhloko wommeli webhizinisi le-cannabis laseMichigan ukukwazisa ukuthi ungahambela kanjani inqubo yokumangalelwa, nokuthi unganciphisa kanjani ubungozi obungokomthetho. Ummeli olungile uzonikeza ukwesekwa okugcwele ekunqumeni ukuthi yiliphi ibhizinisi elidingekayo kwifomu lesicelo olidingayo lokufaka kufomu kanye ne-IRS.
Ngokusho kwe-Michigan Regulatory Agency, abaninimabhizinisi kuzodingeka bahlukanise ezokwelapha nensangu yokuzijabulisa uma bafuna ukusebenza kuhulumeni. Ngokuvamile, akukho mehluko wamakhemikhali phakathi kwensangu yezokwelapha neyokuzijabulisa. Kodwa-ke, udinga ukukhokha intela yempahla eyi-10% esebenza insangu yokuzijabulisa. Lokhu kwenza ibhizinisi lokungcebeleka insangu lifune okuthe xaxa ngokwezimiso nokuxhaswa okufanele kwezezimali.
Ummeli Webhizinisi LaseManchester Cannabis Angakusiza Kanjani?
Uma uthatha isinqumo sokuqala ibhizinisi le-marijuana yezokwelapha, ummeli webhizinisi le-cannabis laseMichigan angakusiza ezindaweni eziningi. Kufanele uthintane nommeli wakho ngohlobo lwelayisense ofuna ukulitholela ibhizinisi lakho.
Izinhlobo zamalayisense webhizinisi leCannabis eMichigan
Uma ucabanga ukuthola ilayisense, kufanele ulungiselele uhlelo lwebhizinisi le-cannabis. Esifundeni saseMichigan, ungafaka isicelo selayisense ezi-5 ezihlukile. Lezi izi:
• Isikhungo sokuhlinzekela
• Transporter Okulondekile
• Indawo yokuhambisana nokuphepha
Njengomlimi, unquma phakathi kwamakilasi amathathu ilayisense yomlimi. Kunezinhlobo zama-A, B, no-C zamalayisense ezibonisa inani lezitshalo ongazitshala.
Isikhungo sokuhlinzeka ngohlobo lwensangu. Uma ufuna ukuba nesikhungo sokuhlinzeka ngebhizinisi lakho, awukwazi ukuba nentshisekelo yezezimali esikhungweni sokuhambisana nokuphepha noma njengowokuhambisa okuphephile. Uzobuye uhlole enye imali yentela eyi-3% yomholo wakho.
I-processor ibhizinisi elisebenzisa i-cannabis kusuka kubatshali futhi lenze ama-edibles, ama-extracts, neminye imikhiqizo ye-cannabis.
I-cannabis evikelekile yokuhambisa okuhamba ngezimali nemali phakathi kwezindawo. Ukuze ube ngumhambisi ophephile, awukwazi ukubhaliswa njengesiguli noma umnakekeli.
Isikhungo sokuhambisana nokuphepha sihlola okuqukethwe kwe-THC insangu, futhi kuleli cala, kufanele uqashe umuntu ophethe iziqu kwelebhu noma kwisayensi yezokwelapha.
Azikho izimiso ezisemthethweni ezithi kufanele ube nempahla eqondile yebhizinisi le-cannabis. Abafakizicelo abaningi bafaka impahla yabo ngaphansi kwesivumelwano, bese befaka isicelo selayisense, futhi uma ivunyiwe, impahla ingathengwa. Ngale ndlela, uqinisekisa ukuthi uvikelekile ngokwezezimali kwinqubo yokufaka isicelo.
Ungasifaka kanjani isicelo selayisense le-Medical Marijuana eMichigan
Ukufaka isicelo selayisense lensangu yezokwelapha eMichigan, kufanele ube nesizinda esicacile, inombolo efanelekile yeminyaka ehlala eMichigan, nemali eyenele. Lapho usudlulise lolu hlobo lwenqubo yokuqinisekisa, ungakhetha ukuthola imvume yelayisense.
Kubalulekile ukuthola ukuthi ilokishi lakho lasemalokishini linomthetho wokungena ovumela indawo yensangu kumasipala ngqo. Uma lokhu kusebenza edolobheni lakho, ungakha izindawo ezidingekayo zokusebenzisa ibhizinisi lakho le-marijuana.
Ngemuva kokuphambanisa inqubo yokuqinisekisa, ungahambela isicelo selayisense lakho. Kubaluleke kakhulu ukuchaza yonke imininingwane yebhizinisi lakho nendawo okuyiyo izakhiwo zakho. Uma unganikezeli imininingwane eqondile, ungaphansi kwengozi enkulu yokwenqatshwa yizikhulu zeMMFLA.
Ngaleso sizathu, kuhle ukubonana nommeli webhizinisi lakho le-cannabis laseMichigan ngemininingwane yonke edingekayo. Uma ufuna ukufaka isicelo selayisense lebhizinisi lezokwelapha, kufanele ucabangele yonke imithetho esebenza kumasipala wakho. Thintana nommeli webhizinisi le-cannabis elilungile laseMichigan futhi uthole konke odinga ukukwazi ukuvula ibhizinisi le-insangu yezokwelapha eliphumelelayo.
Xhumana nommeli webhizinisi leCannabis eMichigan
I-top-notch I-Marijuana Business Law Firm Ukusebenzela ukuqala kokuqala namabhizinisi asunguliwe kwenza uphawu lwawo kwi-Cannabis Industry. Esethu ummeli we-cannabisNgiyayazi imithetho nendawo yemakethe ezungezile insangu yezokwelapha neyokuzijabulisa kanye neHemp ne-CBD.
As abameli be-cannabis sinikezela ngezeluleko ezingabalulekile zomthetho nezebhizinisi ukukusiza uqale owakho indawo yokukhulisa, isikhungo sokuhlinzekela, indawo yokusebenzela, indawo yokuhlola ukuphepha, inkampani yezokuphepha ephephile, noma i-cannabis microbusiness.
Thinta uScott Roberts Law
UScott F. Roberts Law, PLC
I-Detroit, MI 48201
Ucingo: (248) 234-4060
Thola izinkomba emephini →